Nhau - Iyo nyowani BMW 3 Series yepamusoro muviri kristaro giya lever?
Kubva pakatangwa mamodheru eBMW aine G chassis kodhi, mabhatani akave akabatanidzwa munzvimbo inoshanduka, zvichitiunzira akawanda mazano matsva. Iko kusanganisa kweye-bhatani kutanga, otomatiki kutanga-kumira, kutyaira modhi, uye yemagetsi bhureki remaoko ine simba rakasimba rehunyanzvi munzvimbo inochinja.
Asi mune ino nharaunda, chii chinotipa chakanyanya kuona zvinoitwa nekristaro-senge yemagetsi giya lever, inoyevedza uye izere netekinoroji. Unogona kuwana iyo "crystal giya lever" pane iyo 8 Series, X5, uye X6. Iko mukati meiyo nyowani BMW 3 Series yakashongedzwa neye nhema nhema giya lever Mankaleilab anonyatso kuziva mikana yebhizinesi uye akagadzira seti yekristaro-senge yekuchinja levers yezvinhu zvakafanana, iine "3" yakanyorwa mukati, iyo yakafanana chaizvo neyekuchinja lever dhizaini ye8 akateedzana. Ndinovimba kuti BMW ichagadzira zvimwe zvakanaka zvinotsiva zvikamu mune ramangwana, uye varidzi vemota vanogara vachinakidzwa nezvakakodzera zvikamu.